Uncategorized Archive - Soo Saarida Qalabka Kaydinta Qalabka Birta ee Xirfadeed,Taleex,Pallet,Raashin,Weelka Roll Etc
2021 buugga soo dejinta qalabka kaydinta Yougu : yougu storage equipment catalog 2021 new
1. Qafis bir ah oo la laaban karo, naqshad cilmiyeed iyo macquul ah, yaree qarashka hawlgalka shaqaalaha iyo kor u qaadista amniga hawlgalka; qaab dhismeedka laabma, qiimo jaban oo soo laabasho ah oo banaan; 2. Naqshadaynta qaab dhismeedka injineernimada sariirta waa macquul, dhammaan qaybaha waxaa lagu soo saaraa qaabab sax ah, tilmaamaha waa la mideeyay, oo loo dulqaato 1mm; all the parts that are easily damaged and consumable are all…
1. Qafis keyd ah Qafis keyd ah, sidoo kale loo yaqaan qafis mesh biraha, waxay qaadataa qaababka caanka ah ee caalamiga ah. Mugga ka dib laalaabku waa kaliya 1/3 mugga marka la isu geeyo. Waxay leedahay faa'iidooyinka miisaanka fudud, meel dabaq yar iyo isku-dhafnaan habboon. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa xarumaha nidaamka qeybinta loop xiran sida qeybinta qeybinta, qalab yar, wax soo saarka caaryada, alaabta elektarooniga ah,…
1. Shelf Mobile (xirmooyinka xirmooyinka) Shelf Mobile (xirmooyinka xirmooyinka) alaabooyinka ayaa loo qaybiyaa laba nooc: go'an oo furfuran. Waxay leeyihiin qeexitaanno isku mid ah, awood go'an, uma baahna qalab shelf, oo midba midka kale wuu is dulsaaran karaa, taas oo ka samaysanaysa awood kaydineed oo saddex-geesood ah isla markaana xaqiiqsanaysa alaabooyin badan oo is dulsaaran. Si buuxda u isticmaal booska, qaab fudud, waxqabadka xamuulka wanaagsan, isticmaalka habboon, safe and…
Bakhaarro aad iyo aad u tiro badan ayaa adeegsada 5s si ay u maareeyaan santuuqyada bakhaarada iyo alaabada. Shirkado badan ayaa si guul leh u hirgeliyay maaraynta 5s, laakiin shirkadaha qaar kuma adkaystaan ​​maamulka 5s. Maxay bakhaarku ugu baahan yahay 5s maamul? Marka hore, hirgelinta maaraynta 5s waxay xallin kartaa dhibaatooyinka badankood bakhaarka. Qashin la'aan, qalabka, qalabka, qalabkuna wuxuu ku uruursan yahay bakhaarka. The…
Ka dib markii dib loo bilaabay shaqada, ganacsatadu waxay la kulmeen amarro badan waxayna soo bandhigeen dayacamo badan oo ku saabsan maareynta bakhaarka. La'aanta awoodda bakhaarrada iyo baallayaasha oo yaraaday ayaa sababay in shirkaduhu ay bilaabaan inay ka fikiraan daldaloolada maareynta. Sida loo wanaajiyo saxnaanta keenista, saxnaanta alaabada, iyo wax ku oolnimada gudbinta waa dhibaato ay tahay inay shirkadaha wax ka qabtaan, and the loopholes in the store…
Qalabka Keydinta Foshan Yougu Co., Ltd oo ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista dhammaan noocyada kala duwan ee weelasha keydka saadka ee biraha, qafis, boorsada jeebka, jaranjaro, xirmooyinka xirmooyinka, boorsada jeebka, iwm oo gabi ahaanba ah bixiyaha xalka kaydinta. Tani waa badeecadeenii ugu dambeysay, jir birta lagu keydiyo, u isticmaal in alaabta la dhigo bakhaarka. Haddii aad xiisaynayso alaabtayada, you can contact us to inquire about…
Waa Maxay Taleex Iyo Muxuu Qabanayaa?
Gaari-gacmeedku waa gaari xamuul ah oo lagu riixo laguna jiido xoog shaqaale. Waa awoowga baabuurta oo dhan. In kasta oo horumarka joogtada ah ee tiknoolajiyada maaraynta walxaha loogu talagalay gawaarida gawaarida, gawaarida gawaarida ayaa wali la adeegsadaa maanta iyada oo ah qalab maarayn lama huraan ah. Tarooli waxaa si weyn loogu isticmaalaa wax soo saarka iyo nolosha maxaa yeelay waa qiimo jaban, dayactir fudud, hawlgal habboon, light…
Waa maxay Farqiga u dhexeeya shelf Wooden iyo shelf bir ah?
Asal ahaan, khaanadaha caadiga ah ee nolol maalmeedkeena waxay leeyihiin shelf bir ah iyo armaajo alwaax ah, kuwaas oo si ballaadhan loogu isticmaalo nolosheena. In kastoo loo adeegsado dukaamadeenna guud, isticmaalkoodu waa ka duwan yahay Haa, waa maxay kala duwanaanshaha gaarka ah? Khaanadaha alwaaxa waxaa sidoo kale loo yaqaan armaajo adag alwaax iyo shelf cusub. Waa shelf caadi ahaan loo isticmaalo dukaamada laga dukaameysto, supermarkets…
Waa maxay Qalabka inta badan loo adeegsado shelves?
Shelves waa erey guud oo ka kooban waxyaabo badan. Marka imisa shelf ayaa suuqa yaala? Sida laga soo xigtay maaddada, waxay qiyaas ahaan u qaybsan tahay noocyada soo socda: 1) Khaanadaha birta ah: Tani waa noocyada ugu iibka badan suuqa. Laga soo bilaabo kaydinta ilaa dukaamada waaweyn, Khaanadaha birta ayaa leh mugga iibka ugu badan. The reason is that the…
Bog 1 ee 512345»